Khasaaraha nafeed & midka Hantiyadeed ee dagaalkii Boosaaso oo la soo bandhigay | dayniiile.com
Home WARKII Khasaaraha nafeed & midka Hantiyadeed ee dagaalkii Boosaaso oo la soo bandhigay
Khasaaraha nafeed & midka Hantiyadeed ee dagaalkii Boosaaso oo la soo bandhigay
Guddigii xaqiiqo raadinta ee dagaalkii Boosaaso ku dhexmaray Ciidamada Puntland & kuwa PSF dhamaadkii Sanadkii la soo Dhaafay ee 2021 ayaa soo bandhigay qiimeynta Dhamaan Khasaaraha nafeed & midka hantiyadeed ee ka Dhashay dagaalkaas.
Guddiga oo ka Koobnaa 13 Ruux ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni dhawaan Boosaaso kula kumay, isaga oo u balan qaaday in uu bixin doono waxa ay ku qiimeeyaan Khasaaraha Ka dhashay Dagaalkii Boosaaso.
Guddiga waxaa ay sheegeen in dagaalkaas ay ku dhinteen 22 Ruux 86 kalena ay ku dhaaeacmeen, kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar sidoo kale ku khasaartay lacag lagu qiyaasay $807,500 doollar.
Ugu dambeyn Xubnaha Guddiga ayaa eaxaa ay ugu baaqeen Madaxda Maamulka Puntland inay sitoos ah u fuliyaan dhaqan gelinta ama bixinta hantida ay ku qiimeeyeen inay ku khasaartay dagaalkii ka dhacay Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari.
Previous articleWasiirka arrimaha dibadda Ruushka hubka Nukliyeerka uma adeegsan doono dagaalka ka socda Ukraine
Next articleFaahfaahino Dilal ka dhacay Beledweyne iyo laas-Caanood
Dhambaalka hambalyada ee uu Kim Jong-un u diray Putin
Wararkii ugu dambeeyay weerarka ka dhacay degaanka Ceelbaraf